Inkukhu kunye ne-romanesco ivusa i-fry ngamandongomane | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 13/02/2021 10:00 | ngokubanzi
Ekuqaleni kwalo nyaka, uLa Huerta usinike iiRomanescos esikhe sazisebenzisa ekhitshini. Kuba ukongeza ekubeni umhle, le mifuno ixhaphake kakhulu; Inokuphakwa ikrwada kwaye iphekwe kwisaladi, iikhrimu okanye iiresiphi ezinje ngale ndiyicebisayo namhlanje: yenkuku eqhotsiweyo kunye ne-romanesco ngamandongomane.
Indawo yaseRomeesque ine amandla caloric eliphantsi kwaye ityebe kakhulu kwifayibha, ivithamin C, ivithamin K kunye nepritamin A. Ke ngoko, ukhetho olunomdla lokudibanisa kwimenyu yethu ngeenyanga zobusika xa ivunwa. Le yindlela elula kakhulu yokuyivelisa kwaye ilungele abo bangekakhuthazwa ukuba bayizame.
Ilula, iyakhawuleza kwaye isempilweni, injalo nale recipe. Mna ngokwam ndikhetha i-romanescu ephekiweyo ngaphezulu kweminye imifuno enjenge-broccoli. Imizuzu emine yokupheka yanele kum ngaphambi kokubhabha, kodwa ungawatshintsha amaxesha ngokuxhomekeke kwindlela oyithanda ngayo imifuno. Ngaba unesibindi sokulungiselela esi sidlo kunye nam?
Inkukhu, i-romanesco kunye ne-cashew ishukumisa ifry
Le nkukhu iRomanesco Peanut Stir Fry ilula, iyakhawuleza ukuyenza, kwaye isempilweni. Ukhetho olukhulu kwisidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa.
Ixesha lokupheka: 25 m
Breast incum yenkukhu, idayisi
Ukutshiza kwesosi yesosi
Sahlula i-romanesco ibe ngamahlumela kwaye ubapheke emanzini amaninzi anetyuwa imizuzu emi-4. Emva koko siyakhupha kwaye sigcine.
Ngelixa iRomanesco ipheka siqunqa itswele kunye nepelepele ngokurhabaxa.
Fudumeza ioyile ye-olive eyintombi kwipani enkulu yokupanda kwaye susa i-anyanisi kunye nepelepele Ngexesha lemizuzu engama-5.
Ke sidibanisa inkukhu Kwaye sauté ngaphezulu kobushushu obuphakathi de kube nsundu ngegolide.
Songeza iRomanesco ephekiweyo kwaye saunce imizuzu embalwa ngaphezulu ukuze ithathe ubushushu.
Emva sidibanisa iziqholo kunye nesosi yesosi kunye nokuxovula ngelixa sipheka yonke eminye imizuzu emibini.
Ngomzuzu wokugqibela sihlanganisa amandongomane kwaye sikhonza inkukhu kunye ne-romanesco igxotha ifry ngamandongomane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » ngokubanzi » Inkukhu kunye ne-romanesco ivusa i-fry ngamandongomane